မန်ယူနဲ့ စပါး ဘယ်သူနိုင်မလဲ?
July 25, 2019 Writer News 0
Photo Credit-daily express
ICC ပွဲအတွက် အသင်းကြီးတွေ ကစားနေကြရာ ဒီနေ့မှာတော့ မန်ယူနဲ့စပါးတွေ့ကြပါမယ်။တရုတ်မြေပေါ်မှာ ကစားကြမယ့် ပွဲဖြစ်ပြီး၊နှစ်သင်းစလုံးအတွက် ခြေစွမ်းတွေအကဲဖြတ်နိုင်မယ့်ပွဲပါ။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါသေးတယ်။
မန်ယူဟာစင်ကာပူမှာ ပွတ်ကာသီကာနဲ့တစ်ဂိုးသွင်းပြီး အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဒီပွဲမှာတော့ အင်တာနဲ့ပွဲထက် ပိုကြိုးစားရမယ့် အနေအထားရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စပါးဟာ ဒီဘက်ရာသီမှာ ခြေစွမ်းထက်လာတဲ့ အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ဂျူဗင်တပ်နဲ့ပွဲမှာတုန်းကလည်း အသင်းသိက္ခာမကျအောင် ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စပါးအနေနဲ့ ဒီနှစ်လအတွင်း အသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ အနေအထားမှာဆိုရင် လီဗာပူးကိုသာ အလျှော့ပေးခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူဘက်ကတော့ အသင်းကြီးတွေနဲ့အနေအထားမှာ အခြေအနေသိပ်မကောင်းပေမယ့် 7လပိုင်းအတွင်း ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ ပေးဂိုးမရှိဘဲ သွင်းဂိုးတွေနဲ့သာ အောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု 7လပိုင်းအတွင်း ကစားတဲ့ စပါးနဲ့ပွဲမှာလည်း အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
လက်ရှိပွဲထွက်စာရင်းအခြေအနေအရကတော့ မန်ယူဘက်မှာဆိုရင် ပေါ့ဘာ,ဒီဂီယာ, ရှော,မာတာ,၀မ်ဘီစကာ တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ စပါးဘက်မှာတော့ ဝေါကာပီတာ,ကမ်,ပဲရော့,ဖိုရစ်,ဗာတောင်ဟန်,အဲလီ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူနဲ့စပါး ပွဲမှာ အသင်းအနိုင်အရှုံးသာမက ဘောလုံးကစားသမားတွေရဲ့ အနေအထားကိုလည်းပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင် စားကြပါတယ်။
မနျယူနဲ့ စပါး ဘယျသူနိုငျမလဲ?
ICC ပှဲအတှကျ အသငျးကွီးတှေ ကစားနကွေရာ ဒီနမှေ့ာတော့ မနျယူနဲ့စပါးတှကွေ့ပါမယျ။တရုတျမွပေျေါမှာ ကစားကွမယျ့ ပှဲဖွဈပွီး၊နှဈသငျးစလုံးအတှကျ ခွစှေမျးတှအေကဲဖွတျနိုငျမယျ့ပှဲပါ။ နှဈသငျးစလုံးဟာ ICC နဲ့ပတျသကျပွီး ကံကောငျးတဲ့အနအေထားမှာတော့ရှိပါသေးတယျ။
မနျယူဟာစငျကာပူမှာ ပှတျကာသီကာနဲ့တဈဂိုးသှငျးပွီး အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ ဒီပှဲမှာတော့ အငျတာနဲ့ပှဲထကျ ပိုကွိုးစားရမယျ့ အနအေထားရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ စပါးဟာ ဒီဘကျရာသီမှာ ခွစှေမျးထကျလာတဲ့ အသငျးတဈသငျးဖွဈလို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ ဂြူဗငျတပျနဲ့ပှဲမှာတုနျးကလညျး အသငျးသိက်ခာမကအြောငျ ဂိုးတှသှေငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
စပါးအနနေဲ့ ဒီနှဈလအတှငျး အသငျးကွီးတှနေဲ့ကစားခဲ့တဲ့ အနအေထားမှာဆိုရငျ လီဗာပူးကိုသာ အလြှော့ပေးခဲ့ ရတာဖွဈပါတယျ။ မနျယူဘကျကတော့ အသငျးကွီးတှနေဲ့အနအေထားမှာ အခွအေနသေိပျမကောငျးပမေယျ့ 7လပိုငျးအတှငျး ကစားခဲ့တဲ့ပှဲတှမှောတော့ ပေးဂိုးမရှိဘဲ သှငျးဂိုးတှနေဲ့သာ အောငျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခု 7လပိုငျးအတှငျး ကစားတဲ့ စပါးနဲ့ပှဲမှာလညျး အောငျမွငျနိုငျခွရှေိပါတယျ။
လကျရှိပှဲထှကျစာရငျးအခွအေနအေရကတော့ မနျယူဘကျမှာဆိုရငျ ပေါ့ဘာ,ဒီဂီယာ, ရှော,မာတာ,ဝမျဘီစကာ တို့ပါဝငျမှာဖွဈပွီး၊ စပါးဘကျမှာတော့ ဝေါကာပီတာ,ကမျ,ပဲရော့,ဖိုရဈ,ဗာတောငျဟနျ,အဲလီ တို့ဖွဈပါတယျ။ မနျယူနဲ့စပါး ပှဲမှာ အသငျးအနိုငျအရှုံးသာမက ဘောလုံးကစားသမားတှရေဲ့ အနအေထားကိုလညျးပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားကွပါတယျ။
ဆိုးလ်ရှား နဲ့ပေါ့ဘာတို့ရဲ့ မီးစတစ်ဖက်၊ရေမှုတ်တစ်ဖက်